Harry Kane oo qirtay dhibaatada England ee Euro 2020, hadaladii suuqa kala iibsiga ee Man City “ay wax u dhimeen Maskax ahaan” | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Harry Kane oo qirtay dhibaatada England ee Euro 2020, hadaladii suuqa kala...
Harry Kane oo qirtay dhibaatada England ee Euro 2020, hadaladii suuqa kala iibsiga ee Man City “ay wax u dhimeen Maskax ahaan”
HARRY KANE ayaa ka hadlay daalka maskaxeed iyo jireed ee uu la kulmay ka dib laba jibbaar murugada uu dareemay xagaagii hore.
Kabtanka England ayaa ku dhibtoonayay inuu goolal ka dhaliyo Tottenham tan iyo markii uu la kulmay murugo rigoorayaal ah oo looga badiyay Italy finalkii Euro 2020 ka dibna isku daygii uu ku doonayay inuu ku qasbo kooxdiisa ku biiritaanka Manchester City .
Kane ayaa isku arkay xaalad aad u adag oo uu ku bilowday xilli ciyaareedka, kaasoo uu dhaliyay kaliya hal gool oo Premier League ah, islamarkaana uu arkay Spurs oo ceyrisay tababare Nuno Espirito Santo ka dib afar bilood oo kaliya.
28 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa qirtay inuu la dhibtoonayay dhacdooyinka xagiigii hore taasoo ka dhigtay inuusan helin wax isku diyaarin ah xilli ciyaareedka cusub, iyadoo la isla dhexmarayo mustaqbalkiisa kooxda.
Ka hor kulanka isreebreebka Koobka Adduunka ee Albania , Kane ayaa yiri: “Dad badan ayaa ka hadlaya waxa ay tartammada kaa soo saarayaan jir ahaan, iyo xilli-ciyaareedka ka horreeya, iyo inaad si toos ah ugu soo laabato xilli ciyaareed, laakiin waxaan maskaxda ku hayaa ciyaartoy ahaan inaad soo martay xaalad adag. wax badan sidoo kale.
“Waana muhiim in ciyaartoydu ay ka hadlaan taas.
“Waxaad mareysaa heerarkii ugu sarreeyay ee tartanka, adigoo ku soo dhawaada riyo, hadana deg deg ayaa lagaaga qaadayaa.
Ka dib waxa ay ahayd xagaagii ugu horeeyay ee xamaasada suuqa kala iibsiga, in aan la tacaalo xaaladahaas.
“Dabcan maskax ahaan waxay qaadataa dhibaato – laakiin had iyo jeer waxaan lahaa saaxiibo wanaagsan iyo qoys igu wareegsan.
Previous articleWaa kuwee magaalooyinka lagu arkay hubka ay Iiraan soo gelisay Soomaaliya?
Next articleXulka Brazil iyo Xulalka kale ee Xaqiijiyay isoo bixitaanka Koobka Aduunka Guruubyadiisa
Chelsea oo isku diyaarinaysa inay Aurelien Tchouameni amaah ugu soo celiso...
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso Aurelien Tchouameni inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo ka hor inta...
Karim Benzema oo seegay tababarka Real Madrid ka hor kulanka El...
Midowga Musharaxiinta oo mowqif adag kasoo saaray doorashada dalka ka socota
QM oo soo saartay digniin la xiriirta xaaladda adag ee Soomaaliya
Wararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Kuwa laga Qoray Donny van Beek,...